Ungayikhulisa Kanjani I-Twitter Yakho Elandelayo | Martech Zone
Ungayikhulisa Kanjani I-Twitter Yakho Elandelayo
NgoLwesibili, Okthoba 11, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Kungazwakala kuhlekisa kumuntu ongumuntu I-Twitter elandelayo iyancipha ukuthumela i I-infographic yokuthi ungakhulisa kanjani okulandelayo… Kodwa ngizochaza.
Ngenyanga edlule, bengilokhu ngihlanza amashumi ezinkulungwane zama-akhawunti ebengiwalandela ku-Twitter. Bengilandela cishe ama-akhawunti angama-30k, kepha ngikuhlunge lokho ngaya ngaphansi kuka-5k futhi ngiyaqhubeka nokukuhlanza. Njengoba ngilahle ama-akhawunti e-spammy, lawo ma-akhawunti ayekile ukungilandela… okwenza ukuthi okulandelayo kwami ​​kunciphe.
Ngiyeke ukulandela abangane abaningi ngengozi futhi ngabamba usizi ngakho. Uma ngingakulandelanga - vele ungishiyele inothi bese ngiyakulandela… bekungeyona into eyimfihlo. Ngimane ngalandela abanye abantu ngengozi. Noma kunjalo, buyela ku-Infographic! UTwiend uhlanganise leli phepha lokuthi ungakhulisa kanjani okulandelayo ku-twitter futhi lihle futhi libanzi.
Engikuthanda kakhulu ngalesi seluleko ukuthi iseluleko esiqinile sokukhulisa okulandelayo okufanele. Uma uyothenga abalandeli kusuka kwenye indawo, ungahle ube nezinombolo eziphakeme, kepha uzogcwala ugaxekile. I-Twitter ibisebenza kanzima ukukhulisa izinombolo zazo kangangoba uhlelo selubola kusuka ngaphakathi luye ngaphandle ngogaxekile. Okusobala ukuthi ukwehluleka ukungalandeli abantu abaningi. I-Twitter ayikuvumeli… kepha abanankinga uma ulandela ngobuningi. Lokho kuyisimungulu. Ukube i-Twitter izosebenza ngekhwalithi yokuqukethwe epulatifomu yayo futhi isuse abaduni - ikhwalithi ibizothuthuka futhi abantu abaningi bangakhangwa epulatifomu.
Nakhu ukuthi ungakwenza kanjani Khulisa ukulandela kwakho kwe-Twitter:
Funda ukudlala kahle
I-Oct 12, i-2011 ku-4: i-20 PM
Bengihlala ngibe nokulandela okuncane futhi okubhekiswe kakhulu ku-Twitter. Kepha ngicabanga ukuthi onyakeni omusha. Ngingahle ngitshale imali ku-TweetAdder. Ukuze ngikwazi ukwenza inqubo ihambisane kancane.
I-Oct 12, i-2011 ku-7: i-39 PM
Ngicabanga ukuthi i-TweetAdder inezici ezithile ezinhle… kodwa futhi nezinye eziyingozi. Isibonelo, ngilithanda kakhulu ikhono lokusesha ngephrofayili nokulanda uhlu oluqondisiwe. Noma kunjalo, kunethuba elihle lokuhlukumeza uhlelo uma ufuna. Qhubeka ngokuqapha futhi ungalingeki ukukusebenzisa kabi.
Okthoba 13, 2011 ngo-2: 01 AM
Ngiyakuzwa lokhu okushoyo. Kungakho ngifaka kuphela abantu engibalandelayo nengingabalandeli ngesandla. Ngiyazi ukuthi nge-TweetAdder ungakwenza lokhu ngokuzenzekelayo phakathi kwezinye
izinto. Kepha ngiyaxwaya ukwenza lokhu.
Okthoba 14, 2011 ngo-10: 30 AM
Lokhu kungumbono omuhle wezinyoni wezinto okufanele uzenze nokungafanele uzenze. Siyabonga ngokwabelana.